Ra?isal wasaare saacid oo amaanay go?aankii maxkamada sare Britain ku hakisay qorshihii Barclays – Radio Daljir
Ra?isal wasaare saacid oo amaanay go?aankii maxkamada sare Britain ku hakisay qorshihii Barclays
Nofeembar 6, 2013 3:17 b 0
London, November 6, 2013 – Bankiga Barclays ee dalka Britain ayaa hakiyey qorshe uu ku damacsanaa in uu ku xiro kaydad ay shirkada dahabshiil ee Soomaaliya ku lahayd Bankiga, arintaas ayaa timi kadib maxkamad ay isla tageen maamulka Bankiga iyo shirkada Dahabshiil.
Qoraal ay soo saartay shirkada dahabshiil ayaa lagu sheegay in maxkamada sare ee Britain ay gaartay go?aan ah in aan la xirin Kaydka xaawaladu ku leedahay Bankiga, ilaa dhegeysi maxkamadeed la furo oo arintaas khuseeya.
War-saxaafadeedka dahabshiil ayaa u qornaa ?Tani ma ahan guul ay gaartay Dahabshiil oo keliya, laakiinse waa guul u soo hoyatay guud ahaan malaayiinta Soomaalida ah iyo Afrikaanka kale ee ku tiirsan howlaha ay shirkaddu u qabato.?
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon (Saacid) ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu kaga hadlay go?aanka maxkamada sare ee Britain, waxaa uu sheegay in ay tahay guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
?Dad badan oo jooga xeryaha iyo gudaha dalka ayaa dhibaato hor leh iyo macaluul la deris lahayd, maadama ay ku tiirsan yihiin eheladooda debeda, waan soo dhowaynaynaa go?aankan.? Ayuu yiri ra?isal wasaare Saacid.
Barclays ayaa horay u xiray kaydad ay shirkado Soomaali ah ku lahaayeen Bankiga, isagoo ku andacoonaya in lacagaha qaybtood laga cabsi qabo inay gacanta u galaan kooxaha Argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya, dowladda Soomaaliya iyo shacabka ayaa dhowr jeer arrintaan walaac ka muujiyey.
Saado Cali ?dowladda Puntland ha xaliso tabashada shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn.? (dhegeyso)
Sirdoonka Itoobiya oo helay macluumaad sheegaya weeraro Argagixiso oo lala eeganayo Adis Ababa